တရုတ်နိုင်ငံ၏အပြိုင်နှိုးစက်နှစ်ခုပါသော extruder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | ကြွယ်ဝသောစက်ယန္တရား
PP PE ရုပ်ရှင်၊ အိတ်များ၊ အလွှာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုသောဤပစ္စည်းလေးများသည်လုံးလေးများထဲသို့ပြုလုပ်သည်။ single-screw granulator သည်အလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကိုနားလည်စေရန်သယ်ဆောင်ခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း၊ extrusion၊ လေပူခြင်းနှင့်အပူပေးသောအအေးပေးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
လုံးတောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ /စက် / လိုင်း:
PP PE ရုပ်ရှင်၊ အိတ်များ၊ အလွှာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုသောဤပစ္စည်းလေးများသည်လုံးလေးများထဲသို့ပြုလုပ်သည်။
single-screw granulator သည်အလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုကိုနားလည်စေရန်သယ်ဆောင်ခြင်း၊ အစာကျွေးခြင်း၊ extrusion၊ လေပူခြင်းနှင့်အပူပေးသောအအေးပေးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းဝက်အူ granulator မြင့်မားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုရှိပါတယ်;
single-screw granulator တွင်အတွင်းပိုင်းရောနှောခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏ရွေးချယ်မှုအရလျှပ်စစ်အပူ၊ ရေနွေးငွေ့အပူသို့မဟုတ်ရေနံလည်ပတ်မှုအပူနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအရ, အပူချိန်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းထုတ်လုပ်ခံရဖို့ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသည်။
ရောနှောပေါင်းစပ်သူသည်မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ လုံလောက်သောပလပ်စတစ်နှင့်တစ်ပုံစံတည်းပျံ့နှံ့မှုရှိသော "လေးမျက်နှာပြင်ပါသောတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သော ၀ တ်ဆင်နိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အရောအနှောအခန်း" ၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု လုံးလေးထုတ်ကုန်စက်၏ :
Conveyor →ကုန်ကြမ်း Compactor (Feeder) → Extruding system → Die - Head နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ပိုက်ကွန်ဖလှယ်ခြင်းစနစ်→ရေလက်စွပ်တောင့်တင်းခြင်းစနစ် / ခေါက်ဆွဲအတောင့်တင်းသည့်စနစ်→ရေဖျံစက်→တုန်ခါနေသောဆန်ခါ→လေမှုတ်စက်→သိုလှောင်သည့် Hopper
၁။ သယ်ဆောင်သူ - PP PE ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အလွှာများကို compactor / feeder ထဲသို့သယ်ဆောင်ပါ။
2. PE film compactor - ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားပြီးတည်ငြိမ်စေရန်အတွက်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ဖိခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အပြင်ဖိအားပေးသောဖိအားများကို extruder သို့ဖိအားပေးသည်။
Extruding system - ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ခန်းနေသောဓာတ်ငွေ့။
ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေရန် ၄။ အမြန်နှုန်းပိုက်ကွန်ဖလှယ်ခြင်းစနစ်နှင့် Die-head - စစ်ထုတ်သည့်ပစ္စည်းအညစ်အကြေးများ။
5.water လက်စွပ် pelletizingsystem: ရေထဲမှာလုံးလေးများဖြတ်တောက်။
၆ ။ ခေါက်ဆွဲအမျိုးအစား pelletizing စနစ် : ဖြတ်တောက်ခြင်း လုံးလေးများအအေး နောက်မှ water tank ။
7.Dewater စက်: လုံးလေးများခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။
8.Vibrationsieve: badpellet ကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းသော pellet ကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
9. လေမှုတ်စက်: ကောင်းသောလုံးလေးများကို Silo သို့ပို့ပေးသည်။
10: သိုလှောင်မှု Silo: လုံးလေးများစောင့်ရှောက်လော့။
လုံးတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်၏ Maintechnical data:
150KG / H ကို
နောက်တစ်ခု: agglomerator pelletizing စက်
နှစ်ဆဇာတ်စင် extrusion pelletizing စက်